Qiimaha matoorka BLDC 12V 24V Nidaamyada Maareynta Xawaareynta Xawaareynta Dheecaanka Maraya ee DC
≡ Fur menu
Qiimaha gawaarida ee BLDC 12V 24V waa iib
Qalabka jilicsan ee wareega
Motors Helised Geared Motors
Gawaarida Naafka ah
Motorooyinka Bevel Geared
Gawaarida Hypoid Geared Motors
Springs Bevel Geared Motors
Gawaarida Tooska ah
Qaybaha & Qaybaha
Isku-xidhka usheeda dhexe
Fan Fan Qaboojiyaha Fan
Keywords Dheeraad ah
Sanduuqa xagal qumman
Sanduuqa gawaarida korantada
3 matoor wejiyada
Gawaarida Xawaaraha Kala Duwan
Mashiinka Bajaajlaha Gawaarida
Wajiga Korantada Wajiga Korantada
2hp motor motor
3hp wejiga hal mooto
10 hp matoor koronto
Xawaaraha kordhinta xawaaraha
Wajiga Wajiga Labaad Wareega
Dabaysha Dabaysha Dabaysha
Gawaarida korantada ee iibka ah
Samll AC matoorrada
Toos matoorrada hada jira
Laba jibbaar mooto
Xawaaraha dib-u-warshadeynta qalabka xawaaraha
Wadada xawaaraha kala duwan
Loogu talagay Gearboxes
Loogu talagay matoorrada Geared
Loogu talagalay Gawaarida Korantada
Caano la’aanta DC Motors | Qiimaha Hoose, Tayada Sare
12V 24V 36V 48V Brushless DC (BLDC) Motors Manufacturer oo wata tikniyoolajiyada & qalabka ugu dambeeyay '
Waxaan khibrad sannado badan leh u leenahay soo saarista mootooyinka, alaabadayadana waxaa loo dhoofiyaa dalal badan oo dibedda ah. Waxaan leennahay macaamiil go'an oo aamin ah, kaliya waxaan kuu soo saareynaa mooto wanaagsan. Gawaar koronto oo aan cilladeysan lahayn (BLDC motor ama BL motor), oo sidoo kale loo yaqaan matoor elektaroonig ah. Qiimaha jaban, tayo sare leh cadayga dc matoor US NOW ~~
Qiimaha Gawaarida Bldc, Jumladleyda & Shirkadaha
Matoorka DC ee aan cillad lahayn ayaa muujinaya adeegsiga tamarta oo yaraaday, cimri dheer, buuq yar, cabir is haysta iyo astaamaha miisaanka fudud.The STSPIN32F0 waa Nidaam-In-Xirmooyin ah oo bixiya xallin isku dhafan oo ku habboon kaxaynta saddexda weji ee matoorrada BLDC adoo adeegsanaya habab wadis oo kala duwan.China 72V 10kw Gawaarida Korantada Gawaarida ee BLDC. Qalabka DRV10983 waa darawal darawal ah oo wajiga sadex waji leh oo leh awood isku dhafan MOSFET. 1 hp (750W) BLDC motor oo leh cabbir dhan 80 mm murabac ah, wuxuu shaqeeyaa 24V / 48/72 / 96V iyo jiilka buuqa yar.
Shirkadeena waxay bixisaa BLDC motor, Brushless DC Motor, DC d brushless motor, dc iyo wadayaasha mootooyinka BLDC oo leh tikniyoolajiyaddii ugu dambeysay & qalabka qiimo jaban.
Nooc kasta oo ah 24v bldc motor, 5kw bldc motor, 1500w bldc motor, 2000w bldc motor, 3kw bldc motor, waxaad ka heshaa qiimaha ay ka helaan shirkada ugu fiican Shiinaha waxaanan ku siin doonaa labadaba wax qabad aad u fiican iyo qiime jaban.
Xaddiga Awooda Sare wuxuu u dhexeeyaa 200W ilaa 20KW, 1500/3000 RPM, Ujeedada Guud oo leh Kontoroolo iyo xaddiga korantada laga bilaabo 24V ilaa 120V, laga bilaabo gawaarida gawaarida ilaa codsiyada warshadaha. Fudud, is haysta, iyo qiimo jaban.
Codsiyada Warshadaha ee La Adeegsaday
Waxaan bixinaa qiimo jaban, xawaaraha dc bilaa xawaaraha sare leh
Taxanaha taxadarka sare ee 'BLDC' torque Cost-si ku-meel-gaar ah ugu wareegga Brushless DC Motors, oo loo adeegsaday Gawaarida Korantada iyo Codsiga culus ee Warshadaha, elektironikada macaamiisha, gaadiidka. koodhka kor u kaca ama kaabis dhammeystiran ayaa ku lifaaqan, Jaraha aan lahayn Bruceless DC Motors waxay leeyihiin qaab dhismeedka korantada yar ee loogu talagalay codsiyada. Awood leh oo ku filan in la furo ama la xidho indhoolayaasha, ama dalab kale oo fudud.
Waxaan bixinaa alaab tayo sare leh, qiimo jaban. Sannado waayo-aragnimo soosaarida gawaarida ayaa kaliya lagu siinayaa adiga oo leh tayo sare oo waara. Waa maxay Brushless DC motor (BLDC) iyo Sida Loogu Xakameeyo Arduino. STSPIN32F0 waa Nidaamka-In-Xidhmada oo bixisa xal isku dhafan oo ku habboon wadista matoorrada saddex-waji ee BLDC iyagoo adeegsanaya habab waddo kala duwan Haddii aad qabtid wax su'aalo ah sidoo kale waad nala soo xiriiri kartaa, waxaan ku faraxsanahay inaan ku caawinno!
Aynu Wada Hadalno hadda!
Haddii mid ka mid ah alaabooyinkaani yihiin kuwaaga, fadlan nala soo xiriir! Waxaan diyaar u nahay isla markaana sugeynaa iskaashigeenna. Waxaan u qaadanaa tayo ahaan sida faa'iidada iyo qiimaha ugu hooseeya sida daacadda.
U dir Message
Howlaha ugu wanaagsan ee laga helo khabiirkeena gudbinta ilaa toos booskaaga.
ANo.5 Wadada Wanshoushan Yantai, Shandong, Shiinaha
Liiska Calaamadaha Alaabta
© 2022 Sogears. All Rights Reserved.